Abaningi bathole inja, are skeptical kakhulu kho ngokugoma. Bakholelwa ukuthi lezi zilwane akuvamile sigule futhi ngenxa yalokho akubona ngempela ukukhokhela umgomo. Ngaphezu kwalokho, amahlebezi okuthi ingaphumeleli yokugoma izinja, kwanda ngokushesha. Ngenxa yalokho mayelana nokwenqaba abanikazi ukuba bagome izidleke izifo kungaba kusabalala ngokushesha okukhulu - futhi lokhu kuholela ukufa kwezilwane.
Manje ezweni lethu ukukhiqiza wokugoma yasekhaya, kanye afeze ukuthengwa izidakamizwa amazwe. Kule ndaba, amalungiselelo lokugoma zitholakala kalula e isilwane ezitolo kanye Pharmacy wezilwane. Ngokuvamile kwenzeka ukuthi abanikazi ezifuywayo ngokwabo sebeqala kwabathinta izidakamizwa ezifana abafundi ngaphandle asebenzise amasevisi nodokotela wezilwane. Okunjalo khulula ukugonywa izinja sesimeni okusezingeni eliphezulu izilwane ingozi. Uma umzimba uba buthakathaka ngenxa puppy yakho, wokugoma kungabangela ukucindezeleka kwesimiso somzimba sokuzivikela ezifweni. Ngakho-ke, lokhu wokugoma ngeke kuholele elamukelekile. Kumele kukhunjulwe ukuthi imigomo inja inikezwe isebenza kuphela uma isimo sezempilo isilwane esikhulu ngesikhathi izidakamizwa abaphathi.
isilwane sakho ungathola isifo ogulayo, kuyingozi kokubili ngaye nangalabo ngawe. Ngakho-ke, imithi izinja kumele kwenziwe amandla futhi, kungakhathaliseki imvelaphi kanye nobudala besikhumba saleso silwane. Izifo ezivame kakhulu ezithathelwanayo kukhona leptospirosis, isifo, parvovirus enteritis kanye ne-hepatitis esithathelwanayo. Hhayi ukuthi kudingeka nibeke isikhathi nemigomo edingekayo ukuze izinja, wena ngokubeka impilo yabo engozini.
Akufanele sibakhohlwe ngezifo esabekayo njengoba ngamarabi. Bites iziguli ezinalesi sifo izinja ayingozi. Ngenxa yalesi sizathu, wokugoma sesilwane sakho ngokumelene namarabi umthetho ukuthi ungakwazi abakwazanga ukuwela.
Kungakhathaliseki lozalo izinja noma cha, bonke bangabafowabo ngokulinganayo ukungenwa yizifo. Uma wathatha puppy yakho ekhaya, kufanele uqiniseke ukugxilisa esikhathini esibekwe. Ngaphezu lokugoma ezifweni, kudingeka umgomo ngokumelene amakhizane ngoba izinja.
It is waphawula ukuthi ukuba izifo ezibangelwa amagciwane yizilwane kakhulu livikela kakhulu ngaphandle lozalo. Naphezu kwalokhu, lokugoma kuyadingeka kubo bonke abantu ngothi lwabo. Lokhu kuzokwenza ukunciphisa ukusabalala ukutheleleka ezilwaneni nakubantu. Ezweni lethu, ngeshwa, akazange ukuxazulula inkinga kwezilwane ehlangeni, njengoba ngokuvamile kukhona abathwali izifo eziningi. Ngakho-ke, abanikazi bezinja kumele ukuqapha izilwane ukuthi zingekho ukuxhumana izinja ngahlala emgwaqweni. Khumbula ukuthi uma ungenawo ufake ngaphakathi nesikhathi esishiwo ngemigomo edingekayo ukuze izilwane usahlala ekhaya, ngeke bakwazi ukumelana izifo eziningi.
Okokuqala inoculate izilwane at izinyanga ezimbili ubudala. Ngesikhathi lokugoma puppy kufanele kube ephilile. Akufanele babe namazeze nezibungu. Udokotela kufanele uhlole njalo ngokucophelela isilwane sakho futhi ukunquma ekuzimiseleni kwakhe ukuziphatha yokugoma. Ezinsukwini eziyishumi ngaphambi yokugoma lokuqala umdlwane akakwazi ukuhamba izinja zabo. Ngemva wesibili wokugoma Paddock isilwane akuvumelekile izinsuku eziyishumi nanhlanu. Phakathi imigomo okwalandela udinge ukunciphisa umthwalo ngokomzimba besikhumba saleso silwane.
Red-eared ngezilayidi: zosayizi. Usayizi wokugcina walokho okubomvu-izimfudu
Umbandamu e amakati: izimpawu kanye nokwelashwa
Enteritis e izinja
Injabulo Residence 3 * (Thailand, Pattaya): incazelo ehhotela, inkonzo, ukubuyekezwa
"Pinotex" ukhuni - isivikelo ekhaya lakho
"Okungahleliwe" - lokho oyikho nalokho "ukudla"?